လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: ကျွန်တော်ပြောချင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်(၃)
ဗေဒင်ဆရာပုဏ္ဏားတွေကို ယုံကြည်မှုဟာလည်း အခုခေတ်မှာ တော်တော်လေးလွန်ကဲလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဗေဒင်ဆရာပြောလျှင် ပြောတိုင်းအကုန်လုပ်ကြတော့တာပါပဲ။ကဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်မယ့်သူတစ်ဦးပေါ့ခင်ဗျာ။စီးပွားရေးကောင်းအောင််၊ လူသောက်များအောင် ဗေဒင်ဆရာ ကိုသွား မေးပါတယ်။ဗေဒင်ဆရာ ကတော့ဘယ်နားမှာဘယ်လိုလုပ်၊ဒါလေးကိုအဆောင်ယူပြီးလုပ်ဆိုရင်တော့လုပ်ပြီပေါ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည် ဆိုင် လုံးဝရောင်းမကောင်းပါ။ ဘာလို့ရောင်းမကောင်းတာပါလဲ။ သူဖွင့်တဲ့နေရာက တော်တော်လေးချောင်ကျ တယ်၊ သူ့တို့လမ်းထိပ်ဖက်မှာလည်း အခြားသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များရှိနေတယ်လေ။ ဘယ်လိုပါလဲ။ ဗေဒင်ဆရာကို အားကိုးကျတာကိုး၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် ဗေဒင်တောင်သွားမေးစရာမလိုပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ သူတို့ပုဏ္ဏား၊ ဗေဒင်ဆရာတွေရဲ့အလိုကို ကြည့်ကြပါဦး။ သူတို့ပုဏ္ဏား၊ ဗေဒင်ဆရာတွေက ကောင်းကင်နက္ခတ်ဂြိုဟ်ကြီးတွေရဲ့ ပြောင်းလဲမှုဟာ လူတွေရဲ့ ကံကြမ္မာနဲ့ ဆိုင်ပါသတဲ့။ မြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ လူတွေ့ရဲ့ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမှု တွေကသာမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာဂြိုဟ်နက္ခတ်တွေကို ပြောင်းစေပါတယ်တဲ့။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ. .မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုနဲ့ သူတို့ပုဏ္ဏား တွေ ရဲ့ အလို တူတယ်လို့ထင်ပါသလား။ လုံးဝလုံးဝကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ကော ဘယ် အလိုကို လိုက်ပါမလဲ ? ။..။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ မိရိုးဖလာကိုးကွယ်မှုအဆင့်ကနေ တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြစို့လားခင်ဗျာ
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Friday, November 23, 2007
That's right! ကျွန်မလည်း ဘာသာတရားကိုပဲယုံကြည်တယ်...
အင်း ဟုတ်တယ် အကိုရေ။ နတ်တွေကို အရမ်း ကိုးကွယ်ကြတာပဲ သိလား။ သဲကတော့ အဲဒါတွေ မကြိုက်ဘူး။ အိမ်မှာဆို အိမ်တွင်းနတ်တွေလည်း မရှိဘူး။ ဘုရားသန့်သန့်လေးပဲ။
ကျနော်က Blogspot မဟုတ်တော့...Comment ရေးဖို့ ဂွကျနေတယ်...
ဒီလိုရောထွေးတဲ့ ကိုးကွယ်မှုမျိုးဟာ မြန်မာမှာတင် မကပါဘူး။ တခြားဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ပထမတချက်အနေနဲ့ ပြောလို့ရတာက ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ Flexible ဖြစ်မှုကြောင့်လို့ ဆိုရမှာပဲ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ လူတွေရဲ့ Spiritual Needs ကြောင့်ဗျ။ စိတ်ခိုကိုးရာလိုမျိုး လူမှုအပူတွေကျတော့ အကုသလတရားတွေဖက်လေတော့ အခါခပ်သိမ်း ဘာသာရေးလမ်းစဉ်နဲ့ မကိုက်ဘူးဗျ။ အဲဒီအခါမှာ နတ်တို့၊ မှော်တို့၊ ဘိုးတော်တို့က နေရာဖြည့်ကြတာပဲ။
ဒါပေမယ့် ခေတ်ကာလအလိုက် ပြောင်းလဲသွားဖို့ မျှော်လင့်လို့ ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်ကနဲ့ အခု ယှဉ်ကြည့်ဗျ။ (၁) နတ်ကန္နားပွဲတွေ နည်းသွားတယ်၊ (၂) လူငယ်တွေက ၃၇ မင်းနတ်၊ ရိုးရာ စတာတွေကို မျက်နှာလွဲရဲလာကြတယ်။ ကျနော်တို့ အမေတွေခေတ်တုန်းက ရိုးရာကိုင်မှာ သိပ်ကြောက်တာပေ့ါ။ ဒါက ဆိုက်ကိုတစ်မျိုးကိုး။
ပုဂံခေတ်က စလာတဲ့ နတ်ကိုးကွယ်မှုဟာ Phenomena တစ်ခုလို ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခု နောက်မျိုးဆက်တွေရဲ့ လူမှုကဏ္ဌမှာ နေရာသိပ်မရှိတော့ပါဘူးဗျာ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ထောက်ပြချင်တယ်။ ဒီလို လစ်ဟာသွားတဲ့ ဘာဘာရေး စာမျက်နှာမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒလမ်းကြောင်းကို သံဃာတွေက ချမပေးနိုင်ဘူး၊ ချပေးဖို့ ဂရုမထားနိုင်ဘူး၊ သို့မဟုတ် ဘာသာရေးဟာ ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာ ဟန်ပြရှိနေမယ်ဆိုရင် မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ (၁) ဘာသာရေးနဲ့ ဝေးသွားမယ် (ဥပမာ-ထိုင်း) (၂) အဲဒီခင်ဗျားတို့ မနှစ်မျို့တဲ့ နတ်တွေဆီ Spiritual Rely အတွက် ပြန်လည်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ ကျနော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ပေမယ့် ကျနော့် ပုဂ္ဂလိက အမြင်ပါဗျာ။ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲကြပါ။
ကျနော်နဲ့ ၃၇ မင်း ရေစက်နီးဖူးပြီး ပြန်ပြောရရင် ဟာသမြောက်မယ့် အဖြစ်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
ဘယ်နတ်မှ မကိုးကွယ် မယုံကြည်ပါဘူး။ အရင်က နတ်အကြောင်း သေချာမသိပေမယ့် "ဖြူးဆရာတော်ရဲ့ သွေးနဲ့ရေးတဲ့သာသနာ"တရားတော်ကို နာဖူးကတည်းက အနန္တောအနန္တငါးပါးကလွဲပြီး ဘာမှမယုံကြည်ပါဘူး။
လူတွေက သူတို့အဆင်ပြေတာမရှိရင်. နတ်ကိုးလိုက်. ဗေဒင်ဆရာဆီပြေးလိုက်နဲ့. ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းဖို့အလှူခံလာရင်သာမသိဘဲရှိမယ်. နတ်ကနားပွဲတော့ပြေးနေကြတာပဲ..စိတ်ညစ်စရာနော်.